XOG: Dowlada Imaaraadka oo Xiriirka u jari karta Somalia ka dib Safarka Farmaajo ee Qatar – XAMAR POST
XOG: Dowlada Imaaraadka oo Xiriirka u jari karta Somalia ka dib Safarka Farmaajo ee Qatar
Dowlada Imaaraadka ayaa laga yaabaa inay soo dadajiso Go’aanka ay xiriirka ugu jareyso Dowlada Federaalka Soomaaliya ka dib safarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagayo Dalka Qatar.
Diblumaasiyiin falanqeeya Siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in Safarka Madaxweynaha ee Qatar uu sabab u noqon karo inuu sii xumaado xiriirka liita ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda Dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa hore u sheegay in dowlada Qadar ka dambeyso khilaafka xoogan ee xiligan ka dhax aloosan Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa markuu tago dalka Qatar inuu kulamo la qaato Madaxda ugu sareysa dalkaasi, iyadoo laga yaabo in Qatar qudheeda ay la wareegto Mashaariic ay Soomaaliya ka waday Imaaraadka taasoo iyana soo dhaweyn karto inay kala fogaadaan Soomaaliya iyo Imaaraadka.
DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo Farriin u diray Shacabka Muqdisho
Qoysaskii ugu dambeeyay ee ku harsanay Xaafadaha Beladweyne oo ka baxaya magaaladaasi